semitrailer Factory | Mpanamboatra sy mpamatsy semitrailer any Sina
40CBM Bitumen Tanker Tank Truck Asphalt Semi Trailer
1. tahan'ny entana> 98% famenoana feno
2. Taham-bola sisa <0.3%
3. Avo fanaterana> 15m mety indrindra Silo
4. Fanaterana haingana kokoa> 1.5 ton / min fitsinjarana solika
refy ankapobeny：11400 * 2500 * 3970mm
karama：36T (hakitroka: 900kg / m3)
mamehy lanja：manodidina ny 9.5T
40FT 45feet Skeletal Port Terminal Container Skeleton Semi Trailer
Skeleton tranofiara endri-javatra 1. azo ampiharina amin'ny fitaterana ho an'ny ISO 20 ', 40', 45 ', kaontenera mahazatra; 2.Ny famolavolana dia tantara, maka teknolojia famokarana mandroso sy fitaovana fanandramana tonga lafatra hanomezana toky ny firafitra mety sy azo antoka ny vokatra; 3.Ny tena vatan'ny frame dia mampiasa vy mahery Q355B na 700L, fanapahana plastika, fantsom-boaloboka atsofoka semi-mandeha ho azy ary fantsom-boasary CO2, ary ireo tara-pahazavana hahatratra ny vokatra tsara indrindra; ...
Namboarina tany Chine Top Quality 3 axles vy vy tsy misy hatak'andro hamidy
1. Tank miaraka amin'ny fizotran'ny fantsom-bozaka lava / mihodinkodina mandeha ho azy, orinasa mafy orina, malama.
2. Samy famolavolana sy fanamboarana mifanaraka amin'ny fenitra GB18564.1-2006.
3. Ny frame dia mampiasa lalamby L-type, manatsara ny tanjaky ny frame ary mampihena ny lanjan'ny vatana.
Fitaovana azo antoka vy azo antoka legioma azo hanina menaka fitaterana tanker kamiao tranofiara
Ny semi-tranofiara fitaterana ranon-tsakafo dia malaza kokoa eny an-tsena, ary ny ankamaroany dia vita amin'ny firaka aliminioma. Ohatra, ny hatevin'ny ronono dia tsy mila matevina loatra. Noho ny andian'ny fiainana fitaterana dia tsy azo ajanona eo amin'ny fizotry ny fitaterana izany. Amin'ny ankapobeny dia hamatsy axles, kodiarana sy kojakoja hafa. Ny rafitra fanamafisam-peo ABS na EBS dia hapetraka hisorohana ny rollover ary hiantohana ny fandefasana entana tsara.
3 Axle 48000 litatra Carbon Steel Fuel Tank Semi Trailer Manamboatra
Fitaovam-pamokarana fiara fitaterana vy tsy misy fangarony eto an-toerana;
Ny milina fandrosoana P + T mandroso am-paosy mandroso manana tombony amin'ny fidirana las Weld, famolavolana tsara tarehy ary ny taha-pahavitrihana fanaraha-maso ny sary radio iray heny 100%;
Ny vokatra rehetra dia voasedra amin'ny alàlan'ny fitiliana lesoka X-ray;
Fitaovana tanky ho an'ny marika kilasy voalohany eto an-toerana;
Ny lohan'ny lohan'ny loha sy onja dia karazana fanitarana hydraulic, miaraka amin'ny fahasamihafana mitovy amin'ny hateviny, ny tanjaka ary ny hamafiny;
Ny rafitra familiana fiara, ny fampidirana ary ny famoahana ireo kojakoja momba ny rafitra dia voafantina amin'ireo marika kilasy voalohany an'i Shina;
Ny tsipika bundle iray manontolo dia voaisy tombo-kase, tsy tantera-drano ary tsy misy fipoahana, jiro LED;
Ny fitaovana sy kojakoja tanky dia azo hatsaraina araka ny fampitaovana fitaterana.